Izindaba - Imakethe yobhiya yobuciko ngaphansi kobhadane kanye nezinyathelo zokuphikisa ezithathwe yinkampani yethu
Uhlelo Olune-Vessel Brew
Izithelo Isitoreji Tank
Imakethe yobhiya wobuciko ngaphansi kobhadane kanye nezinyathelo zokuphikisa ezithathwe yinkampani yethu
Kusukela ngoJanuwari walo nyaka, lolu bhubhane seludlangile futhi kuvalwe nezitolo ezinkulu, izindawo zokudla, izindawo zokudlela kanye nezindawo zomphakathi. Kuze kube manje, ubhadane seluhlale cishe isigamu sonyaka, okuholele ekuweni komnotho emhlabeni jikelele kanye nenani elikhulu lokuntuleka kwemisebenzi; Ngaphezu kweminye imakethe yamazwe omhlaba ayinathemba ngenxa yezici zomhlaba wonke; Ngokusabalala kwalobhadane, izindawo eziningi zokuphuzela utshwala, izindawo zokudlela, izindawo zokupheka utshwala, njll. Seziyekile ukusebenza, njll. lokhu sekuholele ekukhuleni okungazelelwe kokuthengiswa kwemishini yobhiya wobuciko. Ukuze kuncishiswe umthelela walolu bhubhane, inkampani yethu ivuselele uchungechunge lwezinyathelo, ngokulandelayo:
1. Ukuthuthukiswa komkhiqizo ukuthuthukisa ikhwalithi yezinto zokusebenza zikabhiya kanye nenani elengeziwe lemishini; onjiniyela bethu basebenzisa izidingo zamakhasimende ekwenzeni imishini yokwenza utshwala, ukuze amakhasimende abe nokuhlangenwe nakho okungcono;
2. Hlela kabusha iwebhusayithi futhi ubonise imikhiqizo yethu engcono kakhulu kumakhasimende;
3. Qeqesha onjiniyela bethu emva kokuthengisa ukuthi basebenzele kangcono amakhasimende;
4. Nciphisa intengo yemishini yokuthengisa ukwesekwa kwamakhasimende amaningi ukuze aqale ibhizinisi lokuphisa utshwala ngokushesha okukhulu, futhi anciphise inani ngentengo yokwenza ngcono umkhiqizo;
5. Thuthukisa ukusebenza kwangaphakathi kwenkampani;
Ngiyethemba siba ngcono futhi sikhonze amakhasimende amaningi;
Ngokwezempilo, kufakazelwe ukuthi ukuphuza ngokulinganisela kungaletha impilo yangempela emzimbeni womuntu. IHuaian inciphisa i-cholesterol, iqinisa ubuhlakani, futhi ivuselele ugqozi. Uma uZhang engumuntu omdala osefinyelele eminyakeni yobudala esemthethweni yokuphuza futhi ethanda ukujabulela ingilazi yewayini lePinot Noir njalo ebusuku, uZhang kufanele akwazi ukwazisa imiphumela eyinqaba yokuphuza ngokulinganisela. Kodwa-ke, uma uZhang ethanda ukuphuza utshwala, uZhang kungenzeka angabi nalo ithuba lokuphuza kahle. Ake sibheke izinzuzo zokuphuza ngokulinganisela emzimbeni womuntu. I-Dumens Asian Beer Academy.
Ukuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe besimanje bokwenza ubhiya kunikeza amathuba amakhulu okwanelisa ukunambitheka okuhlukahlukene kwabathengi nezidingo ezingcolile. Njengamanje, ngokujula okungapheli nentuthuko yezinguquko nokuvulwa, ubhiya omnyama onentelezi evamile ungene ngokushesha emakethe yezwe laseChen Mou, futhi sekuye kwaba umkhuba wokuthi abantu babalekele empilweni yanamuhla.